Rambutan any Thailand " Journey-Assist - Ahoana ny fisafidianana rambutan, Sary
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Rambutan any Thailand
Rambutan (Nephelium Lappaceum), Thai - Ngo
Rambutan dia vokatry ny hazo tropika an'ny Nefelium fototarazo, avy amin'ny fianakaviana Sapindov. Havana voankazo toy ny lichee и longan.
Ny voankazo dia toa tsy mampino noho ny anarany mihitsy.
Toa toy ny trondro ao anaty fel-taolana ny endriny. Manana sombin-kibo malefaka mitovy io (manana porofo fotsiny kokoa - roa santimetatra), ary ny haben'ny voankazo rambutan dia akaikin'ny trandrika koa (3-6cm).
Ny voankazo Rambutan dia maniry amin'ny sampahony 10-30. Matetika amidy am-boninkazo izy ireo. Ny loko matotra dia miaina fivoarana tanteraka rehefa matotra amin'ny maitso ka hatramin'ny mena mangirana tsy ampoizina! Io fisehoana mahery setra io dia manafina nofo maloto marefo misy loko fotsy na hatsatra. Izy no mpankafy azy - gourmets - tia rambutan. Ny tsiron'ny pulp dia mamy sy mamy mahafinaritra, mitovy amin'ny tsiron'ny voaloboka. Ary koa, taolana tsy mihinana boribory goavambe miafina ao anatin'ny pulp.
Ny sandan'ny rambutan any Thailand
Mihena ny vidiny amin'ny vanim-potoana tamin'ny 25 ka hatramin'ny 45 baht mandritra ny 1 kg.
Vanim-potoana Rambutan any Thailand
Ny vanim-potoanan'ny rambutan any Thailand dia ny volana May ka hatramin'ny Aogositra. Saingy afaka hihaona aminy amin'ny volana hafa ianao, avy any amin'ny faritra lavitra, tsy mpizahatany any amin'ny firenena, amin'ny vidiny ambony kokoa.
Fomba fitahirizana rambutan
Amin'ny mari-pana tsara 8 ka hatramin'ny 12C, avy eo ny voankazo dia tsy hahavery ny tsirony mandritra ny roa na telo herinandro.
Mandritra izany fotoana izany, ny hamandoana avo dia maniry ho azy. Izany hoe ao anaty vata fampangatsiahana, tsy lavitra ny vata fampangatsiahana, dia hahafaly izy.
Amin'ny hafanan'ny efitrano, mety handainga ny rambutan ary mijanona matsiro sy salama mandritra ny 3 ka hatramin'ny 6 andro.
Amin'ny toe-javatra hafa, hamoy vetivety ny harutan. Amin'ny andro mangatsiaka, ho lasa tsy matsiro izy io, ary amin'ny mari-pana avo, ny “pulp” mora avotra.
Ahoana ny fisafidianana rambutan
Ny hoditry ny rambutan dia tokony ho mena mena. Azo ekena ny sombin-boasary kely. Raha misy teboka maintso dia mbola tsy masaka ny voankazo.
Rambutan volo dia tokony ho malefaka sy malefaka ny mikasika. Raha mora volo na maina izy ireo, dia "stale" ny voankazo ka tsy tokony vidiana.
Ny volo mainty dia manondro fa feno loatra ny rambutan.
Amin'ny ankapobeny, ny rambutan vaovao masaka dia tokony ho mahafinaritra sy falifaly :). - Mena mena, misy volo mena miloko malefaka misy tendrony maitso na mavo.
Ahoana ny fomba hanadiovana sy hihinana rambutan
Rambutan dia mora diovina.
Afatory tsara ny voankazo ao anaty rano mangatsiaka.
Manamboara biraony amin'ny volom-bavony (manana matevina ny 2-3mm)
Maka rambutan amin'ny tanana roa izy, ary manandrana mamadika ny volon-koditra fotsiny. Milefitra mora amin'ny fampidirana ilay zaza, ary misokatra ny foetus.
Ny Thai ihany dia tsy mijoro amin'ny lanonana amin'ny resaka fanadiovana rambutan. Manindrona ny hodi-tànana amin'ny hoho izy ireo, ary manala azy, mizara roa, toy ny peel tangerine. Amin'ity fomba ity, ny zava-dehibe indrindra dia ny tsy manery mafy ny voankazo, raha tsy izany manosotra ranom-boankazo matsiro.
Mora misaraka amin ny pulp ny paiso.
Ny pulp rambutan dia matetika ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo, amin'ny salady mamy. Ary avy amin'ny ranon'ity voankazo ity, any Azia izy ireo dia manamboatra ranom-boankazo mahafinaritra.
Ary koa, rambutan dia ampiasaina am-pahavitrihana amin'ny fanomanana gony, syrup ary saosy isan-karazany.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny rambutan
Rambutan dia manan-karena be amin'ny vitamina C. Ny voankazo iray dia misy ampahatelony ka hatramin'ny antsasaky ny fatra isan'andro ilaina amin'ny olon-dehibe. Vitaminina C dia iray amin'ireo vitamina be mpangataka indrindra amin'ny hery fiarovan'ny olombelona!
Rambutan dia manana votoaty avo lenta, izay misy fiantraikany mahasoa amin'ny metabolism ary mampifaly an'io voankazo io koa.
Ary koa, ny fampiasana rambutan dia prophylactic tena tsara amin'ny ady amin'ny otrikaretina, izay manankarena amin'ny firenena tropikaly. Ny fananany antiseptika dia miambina, miaro ny mpankafy azy amin'ny mikraoba.
Be ny hemôforo - misy fiantraikany tsara amin'ny tanjaky ny taolana sy ny rafitra musculoskeletal iray manontolo.
Rambutan dia misy fiantraikany tsara amin'ny fahasalaman'ny lehilahy sy ny fiterahana.
Tsy voaporofo, fa azo inoana fa ny fampiasana tsy misy lamina dia mampihena ny mety hisian'ny kansera (ary izy ireo izao, any amin'ny firenena mandroso ankehitriny, izay mahatonga ny ampahatelon'ny fahafatesan'ny aretina).
Ny votoatin'ny kaloria ambany sy ny fatran'ny sakafo be menaka dia mahatonga ny rambutan ho vokatra tsara ho an'ireo izay te hampihena ny lanjany.
Ity foetus ity dia misy fiantraikany tsara amin'ny fampandanjanana ny tsindry sy ny fihenan'ny fo, noho ny habetsaky ny potasioma ao.
Manintona amin'ny rambutan
Ny fandrafetana rambutan dia avo fruktosa, ka tsy tokony hosokafan'ireo olona voan'ny diabeta izy ireo. Ny isan'izy ireo isan'andro dia tsy mihoatra ny iray na roa voankazo isan'andro.
Ny olona salama koa dia tsy tokony hanararaotra rambutan. Ny tahan'izy ireo dia tokony hoferana ho voankazo efatra ka hatramin'ny dimy isan'andro. Izany dia ny habetsany mety indrindra mba hahazoana tombony farany sy faran'izay kely indrindra amin'ny rambutan.
Tahaka ny ambiny iray, mila fantatra tsara amin'ny rambutan ianao. Tsy misy contraindications izany, fa misy risika ny tsy fandeferana amin'ny tsirairay amin'ireo singa ao amin'ity voankazo mahasalama sy mahasalama ity.